INGOZI KATOM SEGURA 2020: KWENZEKE NTONI KUTOM SEGURA? - IINDABA
Ingozi kaTom Segura 2020: Kwenzeke ntoni kuTom Segura?
UTom Segura wenzakele kumdlalo we-basketball ngelixa wayedlala umdlalo noBert Kreischer kunye nenkwenkwana. Kule ngozi, umntu ohlekisayo ophuke izandla kunye nemilenze, athe wabelana ngayo nabalandeli kuTwitter nakwiakhawunti yakhe ye-Instagram. Oku kwenzeka ekuqaleni kukaDisemba, ngakumbi uTom uthumele uhlaziyo lwengozi ngo-5 Disemba 2020.
Kwenzeka ntoni kuTom Segura?
UTom Segura wazenzakalisa nge-1 ka-Disemba 2020 ngelixa wayedlala umdlalo webhasikithi kunye noBert Kreischer kwaye kule ngozi, amathambo akhe amaninzi aphukile kwaye ukuchacha kuya kuthatha ixesha. Kungenxa yoko le nto elibazisile imiboniso yehlaya ezayo kunye nemidlalo ecwangcisiweyo kwaye uza kuyilungisa.
NgeKrisimesi, wabelane ngeX-reyi ebonisa ingalo nomlenze wakhe owaphukileyo. Ukwatyhile ukuba unevidiyo ngalo mzuzu xa enzakalayo kwaye loo mifanekiso iza kupapashwa kwi-YouTube yakhe, kwi-Instagram nakwi-Twitter ngoNyaka oMtsha ka-2021.
Ukuphendula kwabalandeli kwingozi kaTom Segura
UTom wabelane ngefoto epholileyo yengalo yakhe eyaphukileyo kunye namacwecwe e-titanium kunye nedolo lakhe kunye negama elihlekisayo kunye nomnqweno weKrisimesi.
Iposi ekwabelwana ngalo nguTom Segura (@seguratom)
Abathandi babuhlungu ngokwenene ngokubukela amahlaya abawathandayo abathandayo betyabeka yiloo nto besabela kakuhle ngokumvuyisa.
Abanye bambiza ngokuba yiBionic Man, abanye bathi une-deltoids ephucukileyo ngelixa abanye bethandazela impilo yakhe ukuze aphile kungekudala.
Uninzi lwabalandeli abanomsindo bagxeka uBert Kreischer kwaye bathi yimpazamo yakhe. Kuya kuba mnandi ukubona amanqanaba asezantsi xa uBert eyedwa kwipodcast ngaphandle kweSegura. Kwelinye icala, uTom uphelisa ukungavisisani kwabalandeli kwiiqhulo zakhe ezihlekisayo kwaye ubenza bazive kamnandi.
Yhu! Ndiyayiva loo nto kwiifoto. Ndiyathemba ukuba uza kuphila kwakamsinya, kubhale omnye fan. Abanye abalandeli bakhe bafana kakhulu naye njengoko beqhubeka nokuhlekisa ngokwenzakala kwakhe kwaye uTom akanatyala. Ungumntu owonwabileyo owenza wonke umntu onwabe kwaye ahleke ngokuvakalayo.
Yiya ngokukhawuleza, Tom Segura!
Izigaba: Inetflix Amazon-Prime Hollywood
mike tysons ex umfazi
iya kuba nini i-rick kunye ne-morty isizini 4 kwi-hulu
Ujeff gordon ex umfazi
rachael ray ngobomi wiki
iingelosi needemon zishwankathela
umhla womntu okhululwayo we-5 umhla wokukhutshwa